समयको पावन्दी छैन, आधा रातमा पनि लेख्छु : रवीन्द्र | Screennepal
समयको पावन्दी छैन, आधा रातमा पनि लेख्छु : रवीन्द्र
२०७१, ७ श्रावण बुधबार ०७:१४screennepalInterview, Music0
गीतकार रवीन्द्र आषिश शैली गीतलाई भावना पोख्ने माध्यमका रुपमा लिन्छन् । पछिल्लो समय गीतिकारितामा चम्किरहेका रवीन्द्र गीतकार हुनुअघि कविता कोर्थे । तर, अहिले उनी गीतकार रुपमा मात्र चिनिन्छन् । स्कुल पढ्दादेखि गीत लेख्दै आएको बताउने रवीन्द्रले औपचारिक गीतकारको परिचय भने गीति एल्बम ‘मायाले बोलाउँछ’मार्फत बनाएका हुन् । ‘५ सयभन्दा बढी गीत लेखेर थन्काएको छु’ रवीन्द्रले भने, ‘पहिले लेख्थे मात्र, रेकर्ड गर्ने सोच नै आएन ।’ आत्मसन्तुष्टिका लागि गीत लेख्ने गरेका गीतकार रवीन्दका शब्दमा अधिकांश चर्चित गायक÷गायिकाले स्वर दिइसकेका छन् । गीतकार रवीन्द आषिक शैलीसँग गरिएको कुराकानी ।
कहिलेबाट गीति लेखनमा हुनुहुन्छ ?
– धेरै पहिलेदेखि नै गीत लेख्दै आएको छु । स्कुल पढ्दै गर्दा पनि गीत लेख्थे । तर, त्यतिखेर लेखेका गीत कपीमै थन्किन्थे । गीत लेखेर रेकर्डिङ गर्नुपर्छ भने सोचै आएन ।
गीत लेख्न कसरी सुरु गर्नुभयो ?
– म आत्मसन्तुष्टिका लागि गीत लेख्ने गर्छु । गीति मनको भावना पोख्ने माध्यम हो, जसका कारण आफ्ना भावना अरु समक्ष पु¥याउनलाई गीत लेख्न थालेको हुँ । म गीत लेख्नुभन्दा अगाडि कविता लेख्थे । केही स्रष्टासँग मिलेर कवितासंग्रह ‘आजको आकाश’ भाग १ र २ निकालेको छु । तर, मलाई कविताभन्दा गीत लेख्दा आनन्द लाग्न थाल्यो । त्यसैले गीति लेखनलाई निरन्तर दिन थालेको हुँ ।
तपाईको पहिलो रेकर्डिङ भएको गीत कुन हो ?
– मायाले बोलाउँछ एल्बमको ‘मेरो मनको आँगनमा’ बोलको गीत पहिलोपटक रेकर्डिङ गरेको हुँ । उक्त गीतमा दीपक लिम्बूले स्वर दिएका छन् ।
‘मायाले बोलाउँछ’ तपाईको पहिलो एल्बम पनि हो । सो एल्बमबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो ?
– एकदमै राम्रो । गीत सुनेका जति कसैले नराम्रो भनेका छैनन् । मलाई यही एल्बमले गीतकारको रुपमा चिनाएको हो । जब मायाले बोलाउँछ एल्बम ल्याएँ, त्यसपछि नै मलाई थाहा भयो कि, आफूलाई गीतकारका रुपमा चिनाउन गीत लेखेर मात्र नहुँदोरहेछ । रेकर्डिङ आवश्यक रहेछ ।
हिजोआज पनि नामकै लागि गीत लेखिरहनु भएको हो ?
– हो, पहिलो कुरा त म नामकै लागि लेख्छु । नाम कमाएपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । साथै, म आफ्नो भावना अरु समक्ष पु¥याउन गीत लेख्ने गर्छु ।
तपाई कस्तो गीत बढी लेख्न रुचाउँनुहुन्छ ?
– म प्रायः रोमान्टिक गीत लेख्छु, जसले श्रोतालाई रोमान्टिक फिल होस भन्ने चाहन्छु । सेन्टिमेन्टल गीत लेख्नलाइ प्रस्ताव आए त्यो पनि लेख्छु ।
तपाईका गीतमा पाइने भावना सबै आफ्नै हुन् ?
– होइन, केही गीत मात्र आफ्नो भावनामा लेखेको छु । अपधकांश गीत अरुको पीडा, रोमान्स र दुःख हेरेर बुझेर लेख्ने गर्छु, किनकि, गीतमा आफ्नो मात्र नभई अरुको भावना पनि समेट्न सकिन्छ ।
कुन समयमा गीत लेख्नुहुन्छ ?
– गीत लेख्नलाई मेरो समयको कुनै पावन्दी छैन । जतिखेर पनि लेख्छु । बाटो हिड्दाहिड्दै पनि लेख्छु । कहिलेकहीँ आधा रातमा उठेर पनि लेख्छु ।
धेरै गीत लेखिसक्नुभयो । त्यसका आफूलाई मन पर्ने एउटा गीत भन्नुपर्दा नि ?
– गायिका अञ्जु पन्तले स्वर दिएको ‘तिम्रो यादले सताउँछ’ मलाई आफैलाई मन प¥यो । नरेन्द प्यासीले गाएको ‘न देखिन्छ घाउ न देखिन्छ रगत’ पनि लाई चित्त बुझ्यो ।
Previous Postमिस युएस नेपालमा १५ भिड्दै Next PostBANG BANG! Official Teaser | Hrithik Roshan, Katrina Kaif